Dagaal khasaare dhaliyay oo ka dhacay Gobbolka Jubbada Hoose | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaal khasaare dhaliyay oo ka dhacay Gobbolka Jubbada Hoose
Kismaayo (Keydmedia) - Dagaal culus oo u dhaxeeyay Ciidamada huwnata ah iyo Maleeshiyaadka kooxda Shabaabka ayaa xalay ka dhacay wadada u dhaxeysa degmada Badhaadhe iyo Kulbiyow ee gobbolka Jubbada, ayadoona dagaalkaasi uu dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jirta oo labada dhinac soo kala gaaray.
Dagaalkaan oo la isku adeegsaday hub culculus ayaa waxaa ay Maleeshiyaad koxda Shabaab ka tirsan ay ku soo qaadeen fariisimo ay Ciidamada huwnata ay ku leeyihiin wadada xiriirisa Badhaadhe iyo Kulbiyow.
Ilaa hadda intala xaqiijiyay 25 ka kala tirsan xooggaga dagaalka uu dhex maray ayaa ku dhintay in ka badan 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalka.
Ismaaciil Saxardiid Taliyaha Ciidamada Soomaalida ayaa Keydmedia u sheegay in 20 ka tirsan Maleeshiyaadkii soo weeraray ee Shabaabka ay dagaalka ku dileen,ayna ka qabsadeen fariisimo muhiim ah oo ay lahaayeen Shabaabka.
Maleeshiyaadka Shabaabka ee weerarka soo qaaday wali dagaalka kama aysan hadlin.